Australia oo hadda soo bandhigtay SIR ay qarinaysay 39 sano & Israel oo eedda yeelatay! (Somalia oo ay wax kasoo gaari karaan?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Australia oo hadda soo bandhigtay SIR ay qarinaysay 39 sano & Israel...
(Canbera) 29 Juun 2018 – Isku-godyo ku jirey kaah nukliyeer oo laga helay idaha Australia, ayaa taageeray tuhun muddo dheer soo taagnaa oo laga qabey walac aan la fahmin oo 39 sano kahor laga arkay hawada Badwaynta Hindiya, taasoo lagu sheegay hub nukliyeer ah oo ay Yuhuuddu si sharci darro ah u tijaabinaysay.
Bishii Sebtember 22, 1979-kii, satellite uu Maraykanku leeyahay oo la yiraahdo Vela 6911 ayaa hawada ka sawiray ”laba hillaac oo waawayn” meel u dhow gasiiradaha Marion iyo Prince Edward Islands oo dhaca koonfurta Badwaynta Hindiya. Waxaana ilaa waagaa socotey wax la isla dhexmarayay oo sheegayay inay halkaa Israel hub halis ah ku tijaabisay.
Xitaa sida ku cad xusuus qorka madaxwaynihii xilligaa ee Maraykanka ee Jimmy Carter, waxaa sidaa aaminsanaa saraakiisha sare ee ciidamada Maraykanka, balse moowqifka rasmiga ah ee Yuhuuddu wuxuu ahaa inaysan arrintan aqbalin ama beeninin, maadaama aysanba qirsanayn inay leedahay barnaamij nukliyeer ah.
Haatan, sida ku cad warbixin lagu daabacay Science & Global Security, isku-godyo kaah sidayaal ah oo ka samaysan curiyaha iodine-131 ayaa xilligaa laga helay qanjir-candhuufeedka idaha Australia, wax lagu sheegay ‘Vela incident.’
Christopher Wright oo ka tirsan Akadimayaha Difaaca Australia iyo Lars-Erik De Geer, oo la shaqaynayay hay’ad Swedish ah oo daraasadeeysa arrimaha difaaca (Swedish Defense Research Agency) ayaa samballo laga qaaday qanjir-candhuufeedkan u diray Maraykanka 1979-kii, waxaana haatan loosoo bandhigay dadwaynaha Australian-ka ah, kaddib markii lasoo saaray xeerka Madax-banaanida Xogta ee Freedom of Information Act.
Isku-godyada laga helay idahan oo uu weliba saameeyay roob 4 maalmood ku da’ayay ayaa muujinaya in ay ka yimaadeen nukliyeer ay Yuhuuddu ku tijaabisay hawada Badwaynta Hindiya, oo ay Somalia ka mid tahay dalalka qaaqama, lamana oga inay sidoo kale wax kasoo gaareen xoolaha Soomaalida, iyadoo ay Israel ku tumatay sharciga xaddidaya tijaabada noocah ah ee Limited Test Ban Treaty oo la meel mariyay 1963-kii.
Daraasaddani “waxay meesha ka saaraysaa shaki kasta oo ku jirey in ”walacdaasi” ay ahayd tijaabo nukliyeer,” ayuu yiri Leonard Weiss, oo ah khabiir dhanka hubka nukliyeerka ah oo ka tirsan Stanford University, oo maqaal ku qoray Atomic Scientists, isagoo sheegay in Israel ay tahay dalka qura ee siyaasad ahaan ku khasban inuu si qarsoodi ah hubkiisa u tijaabiyo isla markaana leh awood farsamo oo ay sidaa ku samayso.
Dan-jiraha Yuhuudda u fadhiya New Zealand, Itzhak Gerberg ayaa isagoo la hadlayay New Zealand Herald, warkan cusub ku tilmaamay “wax lagu qoslo oo biya days badan” waxaana adag in Israel wax tillaabo laga qaado inta ay inkirsan tahay arrinta oo idil.
Previous articleENGLAND VS GERMANY: Kulamadii xiisaha badnaa ee xalay & kulanka adag ee caawa (Tebintii Xaaji)
Next articleTigreega oo sheegay halka ay u socdaan & Imaaraadka oo la hadlay RW Abiy Ahmed (Waxa sahley guusha Tigreega ee Maqalla?)